You are at:Home»Posts Tagged "AAPP (Burma)"
Browsing: AAPP (Burma)
AAPP is hiring!
We are happy to announce the following internship opportunity with AAPP! Documentation and Research Intern Intern tasks include but are not limited to: Producing AAPP’s monthly chronology r
Ko Zaw Yann
ပင်မကျောင်းသားသပိတ်မှရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူကိုတင်ဝင်း၏အာမခံရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှု အခြေအနေ******************************************ရဲများ၏လူမဆန်စွာရိုက်နက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နဲ့အာယုံကြောဆေးရုံတွင်ခွဲစိတ်ကုသခံမှုယူနေရသောပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းမှကိုတင်ဝင်းအမှုအာမခံရရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မှဥပဒေနှင့်အညီအထူးကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊ ကိုတင်ဝင်မှာအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုကြီးပြုလုပ်ထားသဖြင့် ပုမှန်ကျမ္မာသန်စွမ်းမှုမျိုးမရသေးပါ၊ကိုတင်ဝင်းအခြေအနေများမှာ–လည်ပင်းထောက်တပ်ထားရဆဲဖြစ်သည်–အစာအမာများလုံးဝမစားနိုင်သေးဘဲ ဆံပြုတ်သာသောက်နိင်ပါသေးသည်–အသင်ရှုလျင်ကြပ်နေပါသေးသည်—ကိုယ်တိုင်လမ်းမလျောက်နိုင်သေးပါ—ခွဲစိတ်ထားသောပေါင်ထိတ်မှ ကျင်ခြင်း ထုံခြင်းများဖြစ်နေပါသည်။သို့အတွက်ကိုတင်ဝင်းအားဆေးရုံတွင်ဆက်လက်ဆေးဝါးကုသမှု့ခံယူရန်အတွက်သာယာဝတီတရားရုံးမှအာမခံရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။သာယာဝတီခရိုင်ရုံးသို့သွးရောက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ယနေ့ခရိုင်တရားသူကြီးကကိုတင်ဝင်းအာမခံလျောက်ထားမှုကိုဥပဒေအရတတ်နိုင်သလောက်ကူညီမှာဖြစ်ကြောင်းရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ရုံးချန်(2)ချိန်ပျက်၍အမှုတွဲများလျောက်လဲချက်မတင်နိုင်ခြင်းစုစုပေါင်းအမှုတွဲ(8)တွဲ တစ်စု(6)တွဲ(1)တွဲ(1)တွဲ ဖြစ်နေကြောင်းကိုတင်ဝင်းတစ်မှုကိုသီးခြားခွဲထုတ်လုပ်ဆောင်မရကြောင်း ရှေနေကြီးများညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်ဆောင်ကြလျင်ချောမွေမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။လက်ရှိအတိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစဉ်မပြေဖြစ်နေမှုကြောင့်(30.6.15)တွင်လည်းကိုတင်ဝင်းအားမခံရရေးမသေခြာပါ။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-23 02:34:56
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြသောကရောက်ရရှာသော သူရဲကောင်းတို့၏မိဘများ******************************************ယခုအခါ တိုင်းပြည်၏အထွေထွေခေတ်နောက်ကျနေသောပညာရေးကိုပြုပြင်ပြောင်လဲရန်ကြိုးပမ်းရင်းအာဏာရှင်ကြံ့/ဖွံ့အစိုးရကလူသားမဆန်စွာအကြမ်းဖက်ရိုက်နက်ဖြိုခွဲခံရသောပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းမှကျောင်းသားများကိုဖမ်ဆီးပြီးသာယာဝတီထောင်တွင်အကျဉ်းချထားပြီး ပုဒ်မပေါင်းများစွာဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်မှာ(3)လကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျောင်သားပေါင်း(70)နီးပါး၏ကျမ္မာရေးအခြေအနေမှာဆိုးဝါးလာပြီဖြစ်သည်။ဖမ်းဆီးစဉ်ကလူသားမဆန်စွာမတရားရိုက်နက်မှုဒဏ်ကြောင့်ကျောင်းသားများဝန်းရံပြည်သူများမှာအတွင်းကြေဒဏ်ရာများရရှိခဲမှုနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုမရှိခဲခြင်းကြောင့် အတွင်းကြေဒဏ်ရာများမှရောဂါဝေဒနာများတနေ့တခြားခံစားလာရပြီဖြစ်သည်။ဝန်းရံပြည်သူကိုတင်ဝင်းနှင့်မောင်ခင်လှိုင်တို့မှာမှာရိုက်နက်မှုဒဏ်ကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသည်။ကိုတင်ဝင်းမှာ လည်ပင်းအရိုးကွင်းအစားထိုးရသည်အထိရိုက်နက်ခံခဲ့ရသလိုမောင်ခင်လှိုင်မှာလည်းနံရိုးများအကန်ခံရ၍အစာမစားနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ယခုအခါကျောင်းသား(20)၏ကျမ္မာရေးများဆိုးရွားလျက်ရှိကြောင်း(16.6.15)ရုံးချိန်းတွင်ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်မီဒီယာများပြည်သူများကိုထုတ်ပြောလိုက်ပြီဖြစ်၍မိဘများအလွန်စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။မင်းသွေးသစ်က(16.6.15)နေ့ရုံးချိန်းတွင်ပြောကြားရာ၌၎င်းသည်တံတွေးထွေရာတွင်သွေးစလေးများပါ၍စိုးရိမ်ကြောင်း ရိုက်နက်မှုကြောင့်ခေါင်မူးဝေဒနာခံစားနေရကြောင်း တခြားကျောင်းသာများဝန်းရံပြည်သူများလည်းရောဂါခံစားနေရကြောင်းတစ်ချိုနားတော်တော်လေးနေကြောင်းပြောပြပါသည်။ကျောင်းသားအားလုံးအဆင့်မှီသောဆေးဝါးကုသစစ်ဆေးမှုခံယူလိုကြောင်းပြောပါသည်။မောင်မင်းသွေးသစ်အမေကပြောရာတွင် “ကျွန်မသားလေးတိုင်းပြည်အတွက်သူယုံကြည်ချက်ခံယူချက်နှင့်လုပ်တာအစိုးရကထောင်ချတာ အနှစ်တစ်ရာဘဲချချကျွန်မဝမ်းမနဲပါဘူး ယခုလို ရိုက်နက်ထားတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်တစ်ချိန်မှာကျွန်မသားလေးလူစဉ်မမှီဖြစ်မှာစိုရ်မ်တယ်” ဟုပြောပါသည်။အကျဉ်းကျခံ ကျောင်းသားများဝန်းရံပြည်သူများ၏မိဘများ မိသားစုများအားလုံးက ပြောသည်မှာ အစိုးရအနေဖြင့် အရေးယူခြင်းများကိုမရှက်မကြောက်လုပ်နိုင်ပါသည်။သို့သော်သားသမီးခြင်းကိုယ်ခြင်းစာကာဆေးဝါးကုသစစ်ဆေးခြင်များကိုလုပ်ပေးရမည်တာဝန်ရှိကြောင်းပြောပါသည်။ကျွန်တော်တို့(ဝန်းရံ/အထောက်ကူပြု)ကော်မီတီအနေနှင့်လည်းဖမ်ဆီးခံကျောင်းသားပြည်သူများနည်းတူ မိသားစုများနည်းတူထိမ်းသိမ်းခံကျောင်သားများကျမ္မာရေးအတွက်လွန်စွာစိုးရိမ်ကြောင်ကြလျက်ရှိပါသည်။အစိုးရအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များအရ၎င်း လူ့သားရှုဒေါင့်အမြင်ရ၎င်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအရ၎င်း ကျောင်းသာများဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်သားများမဟုတ်၍၎င်း သားသမီးခြင်းကိုယ်ခြင်းစာနာစိတ်အရ၎င်း ဆေးဝါးကုသစစ်ဆေးမှုမဖြစ်မနေလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-20 08:10:14
မဟန်နီဦး ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသူတဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့မှာ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များထဲက တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းဦး ဟာလည်း ထောင် ၂ ကြိမ်ကျခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ ရှေ့နေ တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ မဟန်နီဦးက သူ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်နေတဲ့ အမေရိကန်စင်တာရဲ့ စာကြည့်တိုက် အဖွဲ့ဝင် တဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း စာအုပ်တွေ ဖတ်ရှု လေ့လာကြ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ဖလှယ်ကြ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး စကားပြောကြရင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး အခြေအနေတွေကို ပိုမို သိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃလှုပ်ရှားမှုများ အတွင်းမှာ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားရပ်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တောင်းဆို လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးမှုတို့ကြောင့် ဗကသ ခေါင်းဆောင်များ တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။မဟန်နီဦး၊ ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုစည်သူမောင်တို့ ရှောင်ပုန်းနေတဲ့အိမ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီလောက်မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အင်အား အလုံး အရင်းနဲ့ ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂ ယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ကိုကျော်ကိုကို ကတော့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြည်သူများရဲ့ အကူအညီနဲ့ လွတ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။မဟန်နီဦးကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ပါဝင်မှု၊ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများနဲ့ ဆက်သွယ်မှု၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့ တို့မှာ မင်္ဂလာဈေး ကနေ နတ်မောက်လမ်းအထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု၊ ယုဇနပလာဇာမှာ ဆန္ဒပြမှု တို့မှာ ပါဝင်မှု စတာတွေနဲ့ တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ မဟန်နီဦးက စက်တင်ဘာ ၂၅ မှ ၂၆ ရက်နေ့ တို့မှာ ဒဂုံတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် ဥပဒေ စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုနေတာပါ။ တက္ကသိုလ် တာဝန်ရှိသူတွေက မဟန်နီဦးသည် အဲဒီအချိန်က စာမေးပွဲခန်းထဲ ရှိနေတယ် ဆိုတာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ မရေးပေးခဲ့ပါဘူး။ သက်သေခံ ပြောဆိုပေးဖို့လည်း ငြင်းခဲ့ပါတယ်။သက်သေ ထင်ရှားစွာ မပြနိုင်ဘဲ မဟန်နီဦးကို၁။ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၃ နှင့် ဆန့်ကျင်သော အစုအဝေး၌ ပါဝင်သူ ဖြစ်ခြင်း၂။ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၅ လူစုခွဲရန် အမိန့် ပေးပြီးကြောင်း သိပါလျက် ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော အစုအဝေး၌ ပါဝင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆက်လက် ပါဝင်ခြင်း၃။ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃၄ (က) နိုင်ငံတော် အကြည်အညို ပျက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၎။ အသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ တို့နဲ့ တရားစွဲပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထောင် ၉ နှစ် ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ မဟန်နီဦး ကို ထောင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်ကနေ သူ့မိသားစုနဲ့ ၆၀၇ မိုင် ကွာဝေးတဲ့ လားရှိုးထောင်ကို ပြောင်းလိုက်တာပါ။ကျောင်းသူ ကျောင်းသား၊ လူငယ် လူရွယ်တွေကို ငဲ့ညှာ ထောက်ထားမှု မရှိဘဲ ကြီးလေးတဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ပြီး မိသားစုနဲ့ဝေးရာ အကျဉ်းထောင်တွေကို ရွေ့ပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ သရုပ် သဏ္ဌာန် အစစ် အမှန်ကို ပြသလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ်၂၀၁၅ဖေဖေါ်ဝါရိလမှာကျောင်းသားများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရေးဥပဒေကိုဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲပြဌာန်းဘို့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားအားလုံးမှအေးချမ်းစွာလမ်းလျောက်ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ရာမှာလက်ပန်တန်းမြို့နယ်အရောက်ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုနိုင်ငံတကာကကန့်ကွက်ရှုပ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်မဟန်နီဦးအပါအဝင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဟာရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးယခုအခါသာယာဝတီထောင်မှာအကျဉ်းချထားလျက်မတရားဆွဲဆိုမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သာယာဝတီထောင်ဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုးတစ်ခုပါ။ထောင်တွင်းမှာမဟန်နီဦးတစ်ယောက်ကျန်းမာရေး အခြေအနေမကောင်းကြောင်းကြားသိရပါတယ်။အထူးကုဆရာဝန်နှင့်ကုသခွင့်က်ိုလည်းမပြုဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘာရာဇဝတ်မှုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အကျဉ်းချတရားစွဲဆိုတာကိုမတရားခံနေကြရပါတယ်။ကျောင်းသားများနှင့်ဝိုင်းရံသူများအပါအဝင် မဟန်နီဦး တို့အားလုံး သည် မိသားစုရဲ့ ရင်ခွင်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ရောက်ရှိပါစေလို့ ဆန္ဓပြုပါတယ်။
တရုတ်သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမှ အသက် ၆၉ နှစ်ရှိ ဦးဘမြင့်ပါသုံးဦး�
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံ ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်က တရုတ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမှ အသက် ၆၉ နှစ်ရှိ ဦးဘမြင့်ပါ သုံးဦးအား ဒဂုံတရားရုံးက ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်လေးလစီချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှ ဇွန် ၁…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 09:31:14
တောင်သူတွေဟာ ပိုက်နက်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံနေရ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံစက်မှုဇုန်အနီး ဥယျဉ်ခြံမြေတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တောင်သူတွေဟာ ပိုက်နက်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံနေရပါတယ်။ ဦးကျော်စိုး သတင်းပေးပို့ပါတယ်။ DVB TV – 18.06.2015
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 09:17:18
DVB Live – The Daily Eleven နေ့စဉ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်(၁၇)ယောက် တရားစွဲမှု တိုက်ရိုက်မေးမြန်းချက်
Eleven Media Group မှ ထုတ်ဝေ နေတဲ့ The Daily Eleven နေ့စဉ်သတင်းစာ ရဲ့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦး ကို တရားရုံး မထီမဲ့မြင်ပြုမှု နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်ေ…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 08:04:09
ကျပ်ပြေး အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်သူများ မတရားဖမ်းဆီခံ အကျ ဉ်းချ ထားခံနေရသည်ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး တို့ ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမည်****************************************စစ်ကျွန်ပညာရေး အား ကန့် ကွက်သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသားသပိတ်ပင်မ စစ်ကြောင်းအား အာဏာပိုင်တို့ မှ လက်ပံတန်းတွင်အကြမ်းဖိနှိပ်ဖြို ခွဲခဲ့ကြသည်။ကျောင်းသားသပိတ်အားထောက်ခံ၍ အကြမ်းဖက်မှုအား ကန့် ကွက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချ မ်းစွာ ဖြေရှင်းစေလိုသောဆန္ဒ ကြောင့် မိတ္ထီလာမြို့ နေ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ဆုတောင်းပွဲပြု လုပ်ကျ င်းပခဲ့ခြင်းအပေါ် အာဏာပိုင်တို့ မှ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆို ခြင်းဖြစ်သည်။**မိတ္ထီလာပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက် မှ ဒေါ် မြင့်မြင့်အေး**မိတ္ထီလာ NLD မှ ဒေါ် ခင်မေစီ**မိတ္ထီလာ ၈၈ ငြိမ်းပွင့်မှဒေါ် မေသက်ဦး တို့ အားယနေ့မိတ္ထီလာတရားရုံးတွင် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး သည် မြေသိမ်းခံနေရသော တောင်သူများအား ကူညီမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ လ ကျ ခံနေရသူဖြစ်ပြီး ယခု အမှုကို အကျဉ်းထောင်ထဲမှနေ၍ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။၁၉.၆.၂၀၁၅မိတ္ထီလာမြို့ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09262686706ယခု မိတ္ထီလာရုံး တွင် ရုံးထုတ်လာပြီဖြစ်သည်။
INTERVIEWSJakob von UexküllNilantha IlangamuwaTOPSTORY THE CURRENT GLOBAL SYSTEM IS BUILT ON SAND torturemag@ahrc.asia, May 4, 2015 “We need to accept this challenge or our children and grandchildren will see us as the greatest criminals who ever lived” JAKOB von UEXKÜLL INTERVIEWED … Read more0C…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 03:51:18
ဦးကိုကိုကြီးက နင်လားဟဲ့ ငရဲ ဆိုမလား ဆိုတဲ့ထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမူ့များ( ၁၁.၆.၁၉၉၄) အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ကားနှစ်စီး ၊ လူလေးဆယ် ၊တရွေ့ရွေ့။အိပ်ကောင်းတဲ့အချိန် ဆွဲခေါ်ပြီးခြေချင်းရိုက် ၊ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း ထိုးသိပ်ထည့်လာရတဲ့ပစ္စည်းတွေ ၊အဲဒါတွေကိုတောင် ခေတ္တခဏမေ့လျော့သွားပြီးလွတ်လပ်တဲ့လေကို အငမ်းမရရှုရှိုက်နေမိတယ် ။ဪ– သုံးနှစ်လောက်အတွင်း ဘာတွေများပြောင်းနေပြီလဲ၊ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းကို ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ငေးမောရင်း ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူများ တွေ့လေမလားလို့လည်းမရေမရာ မျှော်လင့်နေမိသေးတယ် ။အင်းစိန်ထောင်ကြီးကို ကားပေါ်က လည်ပြန်ကြည့်ရင်းကိုယ့်ဆန္ဒမပါဘဲ ရောက်လာခဲ့ရ ၊ကိုယ့်ဆန္ဒမပါဘဲ နောက်တစ်နေရာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မသေမချာ ။ငေးမောရင်း ၊တွေးတောရင်း၊မျှော်လင့်မထားတဲ့ ပြဿနာက ပေါ်လာပါလေရော ။မနက်စောစောဆို ဆီးသွားလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာ ကျန်းမာရေး ၊ ကျန်းမာရေး လို့အော်မယ့်စပယ်ယာကလည်းမပါ ။ပေါက်တော ၊ ပေါက်တော အော်မယ့်သူလည်းမရှိ ။ဘယ်ရှိမတုန်း ။လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ၊ရှေ့မှာက လက်နက်အပြည့်အစုံ နဲ့ ကားတစ်စီးအလယ်မှာကျနော်တို့ ထောင်ပြောင်း ကားနှစ်စီးနောက်မှာက လက်နက်ကိုင် ကားတစ်စီးလမ်းမှာရပ်ဘို့ နေနေသာသာ ၊အရှိန်တောင်အလျော့မခံဘူး ။ကဲ– ကြံစမ်း ။ အရေးအကြောင်းဆိုဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲ ‘ဘတ်သီး ‘လင်းတတ်တဲ့ ‘ဇော်မင်း’ရင်းနှီးသူအားလုံး ဘယ်သူမှ ဇော်မင်း လို့မခေါ်ဘူး ။အာကြီး ( အာဗြဲ ) ။ “ဟေ့ကောင် ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ ။ထမင်းအိတ် နှစ်အိတ် ကိုပေါင်းလိုက် ၊””ဘာလုပ်မလို့လဲ””ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ထဲပေါက်ထည့်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်”လူနှစ်ဆယ်ကြားထဲ ခြေချင်း တန်းလန်း နဲ့မိုးတိုးမတ်တပ် ရှုးပေါက်ဘို့ ဆိုတာတော်တော်စွန့်စားရမယ့်ကိစ္စ ၊မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီး အောင့်ထားလိုက်တယ် ။ကြာလာတော့ ကားကလဲဆောင့် ၊ ဆီးကလဲအောင့် ၊ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့ စွန့်စားကြည့်မှ ဖြစ်တော့မယ် ။ခြေချင်းကိုတစ်ဘက်ကထိန်းကိုင်ရင်းထမင်းအိတ် လှယ်ထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကိုပုဆိုးအောက်ကနေ အသာ ထည့်လိုက်တယ် ။အပေါက်အလမ်းမတည့်ဘူး ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်တာဘဲ ။ကားကလည်း ခုန်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ ။နောက်ဆုံး အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ့ အောင်မြင်သွားတော့ တခြားဆီးသွားချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကျနော်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်ပေါ့ ။အဲ့ သလို တရွေ့ရွေ့ နဲ့လမ်းရဲ့သယ်ဆောင်ရာ ဟိုအဝေးကို အဝေးကို ၊မင်္ဂလာဒုံ ၊ မှော်ဘီ ၊ တိုက်ကြီး ၊—– သာယာဝတီ ။တော်ပါသေးရဲ့ ။ မိသားစုသွားလို့လာလို့ သိပ်မဝေးသေးဘူးလို့တွေးမိနေတုန်း ၊ရှေ့ကားတစ်စီးက အယောက်နှစ်ဆယ်ကိုဆင်းခိုင်းနေပါပြီ ။ ခြေချင်းတွေ တိုးလိုးတွဲလောင်း ၊အထုတ်တွေ ဖိုသီဖတ်သီ နဲ့ တီအီးအလဲဗင်းကားကြီးရဲ့နောက်ပေါက်ကနေ ခွကျော်ပြီးဆင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်မသက်မသာနဲ့ ကြည့် နေရပါတယ် ။ဂျင်မီ ၊ ဌေးကြွယ် (ထောင်ထဲမှာဗိုက်ခွဲပြီး အတွင်းအပြင် ၁၀၈ ချက်ချုပ်ခဲ့ရပြီးမသေလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့သူ ) ၊ စည်သူ (ထောင်တွင်း ကျဆုံး ) ၊ညွန့်ဇော် ( ထောင်တွင်းကျဆုံး ) အပါအဝင် နှစ်ဆယ် ။သာယာဝတီ အုတ်ရိုးထဲကို တစ်လှမ်းချင်း ၊ တစ်လှမ်းချင်း ။အဝင်ဝမှာ ဒူးကျော် ခေါင်းငုံ့ဝင်ရအောင်တမင် စီရင်ထားတဲ့ ထောင်ဘူးဝ ထဲကိုခြေချင်းသံ တစ်ချွင်ချွင် ၊အထုတ်တွေကိုယ်စီ နဲ့ ။နောက်ကားပေါ်ကနေ ငေးမောကြည့်နေတုန်း”အပြန် တစ်ခါထဲဘိလပ်မြေသယ်ခဲ့မယ်”ထောင်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ပြောသံကိုမှန်းဆရင်းရှေ့ခရီးကိုတော့ ရိပ်ကနဲ သိလိုက်ပါပြီ ။”ဧရာဝတီအနောက်ခြမ်းက မြင်းခေါင်းတံဆိပ်နဲ့မြို့ကလေး”နေခဲ့တော့သူငယ်ချင်းတို့ရေ ။တစ်ခါတုန်းကကျော်ကြားခဲ့တဲ့”သာယာဝတီထောင်မှငရဲခန်းများ”ကျနော်ကတော့ ကုန်းတစ်တန် ၊ ရေတစ်တန် ၊ခရီးဆက်ရဦးတော့မည် ။(ဆက်ပါဦးမည်)ကိုကိုကြီး (၁၈.၆.၂၀၁၅ )ပြန်လည်မျှဝေပါသည်
The Daily Eleven သတင်းစာမှ အယ်ဒီတာ ၁၇ ဦးအား ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထပ်ဆင့်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်…
The Daily Eleven သတင်းစာမှ အယ်ဒီတာ ၁၇ ဦးအား ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထပ်ဆင့်တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-18 10:18:43
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး(မိတ္ထီလာပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်)NLD မှထုတ်ပြန်သော ရက် ၆၀ အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူမည်ဆိုသော ကြေညာ ချက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှ NLD အဖွဲ့ဝင်များအားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့စဉ် ၁၉၉၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ရက်နေ့တွင် သူမသည်ပထမအကြိမ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိန်းသိမ်း ခံရသူများအနက် အထက်မြန်မာ ပြည်တွင်ကာလအကြာဆုံး ထိမ်းသိမ်းခံရ သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူမသည်နိုင်ငံရေးစတင်လုပ်ဆောင် ချိန်မှစပြီး NLD နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အထိ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ တွင်လည်း (၉၉၉၉) အခမ်းအနားကို မိတ္ထီလာမြို့မှစတင်မည်ဟူသောသံသယဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ တဖန် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးစတင်ချိန် စက်တင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလခွဲထွက်ကာ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ မဲအရေအတွက် ၆၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက် ကိုစတင်ထူထောင်ပြီး လယ်သမားအရေးကို အထူးလုပ်ဆောင်ပါ ၀င်နေသူဖြစ်သည်။ မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာခရိုင် လေးမြို့နယ်ရှိ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လယ်သမားအရေးကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာခရိုင်ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် အိုးပြွန်ကန်ရွာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ထွန်တုံးတိုက်ပွဲကို စတင်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ တွင်ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း ပေါင်းတည်မြို့ နှင့် နတ်တလင်းမြို့ အကြားရှိ လယ်ဧက ၁၀၀ ကျော်သိမ်းဆည်း ခံထားရမှုနှင့် ပက်သတ်ပြီး ထပ်မံဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် သူမသည် အိုးပြွန်ရွာ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲနှင့်ပက်သတ်ပြီး မိတ္ထီလာအကျဉ်းထောင်တွင် ထောင် ၂ လ ချထားခြင်း ခံနေရသည်။ ယင်းသို့ ထောင်မချမီရုံးချိန်းပေါင်း ၇၀ ကျော်၊ သက်သေပေါင်း ၆၀ ကျော်တင်သွင်းရာ သက်သေ ၅၆ ဦးအထိစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ပါဝင်ကူညီသော လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ( Land Rights) အတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များမှာ — စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပတောင်း လယ်သမားအရေး၊ မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာမြို့နယ် သပြေသာရွာ တံငါရွာတို့မှ လယ်သမားများ လယ်သမားအရေး၊ စဉ်ကူးမြို့ ညောင်ဝန်းကျေးရွာ လယ်သမားအရေး ထွန်တုံးတိုက်ပွဲများတွင်
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-18 09:45:26
Daw Myint Myint Aye (Public honory Network) She was arrested while the members of NLD were arrested because of the statement that will call Hluttaw during 60 days, in 1998, Sep, 6. In upper Myanmar, she was the longest person in NLD members. She served in NLD since the beginning of her political life and also she served asamember of NLD for 20 years. She served asasecretary of NLD for over 10 years. In 1999 Sep, 7, she arrested because of doubt that she will hold the ceremony of 9999 in Meiktila. When the Golden Yellow Revolution began, she also arrested in 2007, Sep, 25. Later she left from NLD as individual in 2012, Feb, 12 and then she competed Bi-election in 2012. The number of vote that elected her were over 6000 votes. After the election, she established Meiktila Honory Network and then she was especially participating for farmers who were kept their farm. In firstly, she began her participation the farms that was kept to get back in Mandalay Division, Meiktila district. In 2012 July, the villagers in Mandalay Division, Meiktila district Wintwin Township, Opyunkan Village participated the first struggling for the farms (Pouching) of Myanmar. In 2013, June, 11, she was arrested for over 100 areas of farms that is between Paungte (the western part of Bago) and Nattalin were kept. Now, she was arrested for two months because of struggling for farms (Plough). In this case, before she arrested, she had been faced with 70 appointments at court and over 70 seeres. She had been participating in as follow;(1) The matter of farmers who live in Mandalay Division, Mattaya township, Tha-Pyay and Ta- Ngar villages……(2) The matter of farmers who live in Mandalay Division, Sintkuu township, Nyaung Wun village and(3) The matter of farmers in Sagaing Division, Sarlinngyi township, around the La- Pa- Daung mountain.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 14:20:35
“လျှပ်စစ်မီတာခ လျော့ကျရေး ။ သတင်းထောက်ကိုပါကြီး အသက်ခံရမှု” အမှု့မှန်ပေါ်စေရန် ဆန္ဒပြမှု့ဖြင့် မတရားဖမ်းစီးခံထားရသော ကိုသိန်းအောင်မြင့် ထောင်အတွင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း ကြားသိရ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 14:13:48
DVB – (၁၀) ကြိမ်မြောက် သာယာဝတီ တရားရုံးထုတ် မြင်ကွင်းများ
DVB TV – (၁၀) ကြိမ်မြောက် သာယာဝတီ တရားရုံးထုတ် မြင်ကွင်းများ ရိုက်ကူး – ဇေယျ၊ ရန်နိုင်၊ ဥာဏ်ကြီး တည်းဖြတ် – သူသူအောင်
မြန်မာသတင်းသမားများ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ် ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်ခံနေရ – DVB
မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းသမားတွေဟာ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ် ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်ခံနေရ တယ်လို့ ယူကေအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (အေအိုင်) က[…]
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 10:27:47
ယနေ့ နံနက်(9:00)အချိန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရတဲ့ကျောင်းသားသပိတ်ဝန်းရံသူ ကိုခင်လှိုင်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေမှုမှာ သက်သာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာလို့ ဆေးရုံမှနံနက် ၁၁း၃၀ အချိန်တွင်ဆင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်သို့ပြန်ပို့ပါမယ်လို့ သွားရောက်နှုတ်ဆက်ပြီး ဒိုက်ဦးမြို့ကူညီထောက်ပံ့ရေးမှဘုန်းဘုန်း မှ မုန့်ဘိုးပေးလိုက်သည် မုန့်ဖိုးငွေကျပ်တစ်သောင်းအား ညီလေးထံပေးအပ်ကာ စကားလက်ဆုံကျခဲ့သည်။ညီလေးခင်လှိုင်ဟာ လက်ရှိအစာအိမ်အရေးပြားပေါက်ပြဲတာရယ်။ညာဖက်နံရိုးရောင်တာရယ်ဝေဒနာကိုကုသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံရိုးဟာ ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ရိုက်နှက်ကန်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ ကာယာကံရှင်ပြောပြလို့သိရပါတယ်။ထောင်ထဲပြန်ရောက်တဲ့အခါ အစာကို နူးညံ့တဲ့အစာအားစားသောက်ရမည်ဟု ဆရာဝန်ကြီးများက ယနေ့ဆေးရုံဆင်းကာနီးအချိန်မှာညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိခဲ့ရပါ၏။(ဗသက်အောင်)17-6-2015နံနက်-11:08 နာရီ။လူနားမေးမှတ်တမ်း
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 10:22:42
အလုပ်သမား သပိတ် မှ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ အခြေအနေ****************************အလုပ်သမား(ပုဂ္ဂလိက) များ၏ အခြေခံလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြသော ရွှေပြည်သာအလုပ်သမား စုပေါင်း သပိတ် ဆင်နွဲခဲ့သူများကိုမတရားဖမ်းဆီးထားရာ ယနေ့  ရန်ကင်းတရားရုံးချိန်းတွင်၅ယောက် ၊၁၀သိန်းတန် အာမခံ ရပြီးကျန်လူများ မှာ ရမန် ၂ပတ် ရုံးချိန်းလိုက်ပါသည်။-(၁)စန္ဒာမြင့်(၂)မ စပယ် (၃)ကိုအောင်ကို (၄)ကို မိုးဟိန်း တို့အာမခံမရ ပါ-(၁)မအေးစန္ဒာဝင်း (၂)မ ယမင်း(၃)မ အေးမိုးခိုင် (၄)ကို ပြည့်ဖြိုးအောင် (၅)ကိုမင်ဇော်ဌေး (၆)ကိုအောင်ဇေယျာဝင်း တို့ အား ငွေ/ကျပ်( ၁၀)သိန်းတန်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပါသည်ကိုသူဇော် ၊ကိုနိုင်ဇော် ၊ကိုစိုင်း တို့ကို ၂၂ .၆.၂၀၁၅ သို့နောက်ထပ်ရုံးချိန်းပြန်ချိန်း လိုက်ပြီး ပုဒ်မ-၅၀၅/ ခကိုနိုင်ဌေးလွင် ၊ကိုမျိုးမင်းမင်း တို့အား ၁၈.၆.၂၀၁၅ တ/ဥက္ကလာတရားရုံး သို့ပြန်လည်ချိန်းဆိုသည် ပုဒ်မ-၅၀၅/ခ ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည။